Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguRonald
Indlu encinci kwaye ixhotyiswe kakuhle ibekwe kwisakhiwo esakhiwe ngo-2009 kwaye kukuhamba imizuzu emi-5 kuphela ukuya kumbindi wesixeko, indawo yabahambi ngeenyawo.Unemizuzu nje eyi-15 ngeenyawo ukuya kwipaki yedolophu enenqaba. Kananjalo kungaphantsi kwemizuzu eli-10 ukuhamba ukuya eMeđimurje Polytechnic kunye neFakhalthi yeMfundo yooTitshala.
I-Apartment ixhotyiswe nge-Wi-Fi yasimahla, i-TV ene-USB media player, umatshini wokuhlamba, isomisi selaphu, intsimbi, inkqubo ye-hifi, ikhitshi, i-microwave, isitovu, ifriji, i-A/C, inkqubo yokufudumeza, igumbi lokuhlambela elinendlu yokuhlambela kunye nesomisi enwele.
Ivenkile yokutya iLidl kunye nekhemesti ikwimizuzu emi-5 ngeenyawo. Sela ikofu yakho yasekuseni kwi-Patrix bar, ibar edumileyo ehonjiswe ngokufudumeleyo ehlala kwisakhiwo esinye esingezantsi.Ngaphaya kwesitrato ungatya i-pizza (i-5 eur), igrill okanye intlanzi kwi-resaturant Stara vaga. Ungaya kwisidlo sakusasa esilungileyo kwihotele ekufutshane malunga ne-euro ezili-10.
Ukuba ufuna naluphi na uncedo, ungasoloko undifowunela okanye undithumelele umyalezo kwiViber, WhatsApp okanye iSMS.